ललितपुर – MeroJilla.com
पन्त हत्या प्रकरण प्रतिवेदन पेश, कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता Tuesday, September 25th, 2018
अब एनजिओ र आइएनजिओलाई कडाइ गर्ने तयारीमा सरकार Thursday, June 7th, 2018
काठमााडौं । राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आइएनजिओ)को अनुगमन र नियमनमा अब कडाइ गरिने भएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा तथा दुवै मन्त्रालयका पदधिकारीबीच आज गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले एनजिओ र आइएनजिओको गतिविधि निगरानी नहुँदा विकृति बढ्दै गएकाले यसको नियमनलाई तीव्रता..
साझामा अव टिकट अनिवार्य Monday, March 5th, 2018
ललितपुर। साझा यातायातले आफ्ना यात्रुका लागि टिकट अनिवार्य लिनुपर्ने नियम बनाउने भएको छ। टिकट नलिने यात्रु र नदिने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने तयारी गरिएको कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेयले बताए। साझा यातायातमा चढ्दा कतिपय यात्रुले टिकट बेवास्ता गरेकाले टिकट नलिने÷नदिनेलाई कारवाहीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो। “यात्रुले टिकट लिन गाह्रो मान्ने गरेका..
सेवाग्राहीले सवारी चालक प्रमाणपत्र ‘स्मार्ट कार्ड’ पाएनन् Saturday, January 20th, 2018
ललितपुर ,६ माघ । यातायात विभागअन्तर्गतको वाग्मती अञ्चल कार्यालयबाट सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को परीक्षामा पास भएर राजस्व बुझाएका डेढ लाख सेवाग्राहीले स्मार्ट सवारी चालक प्रमाणपत्र कार्ड पाएका छैनन् । पहिले वाग्मती अञ्चल कार्यायलयबाट मात्रै स्मार्ट कार्ड वितरण हुने गरेकामा अरु अञ्चल कार्यालयबाट समेत सेवा शुरु भएपछि मेसिनको क्षमता पर्याप्त नभएको कार्यालयका प्रमुख..
कलंकी–कोटेश्वर सडकखण्डमा अब जाम नपर्ने Friday, January 12th, 2018
ललितपुर ,२८ पुस । तपाई कलंकीको जाममा कतिपटक पर्नुभएको छ ? एक दुई वा त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ । यदि तपार्इं काठमाडौं उपत्यका बाहिर ओहोरदोहोर गरिरहनुहुन्छ भने दशौँपटकसम्म पनि जाममा पर्नुभएको हुनसक्छ । तर अब भने त्यो समस्याबाट मुक्ति पाउनु हुने भएको छ । चिनियाँ सरकारको सहयोगमा नेपालमा पहिलो पटक आठ लेन सडक कोटेश्वर–कलंकी–चक्रपथ विस्तारको काम भइरहेको छ । छ महिनामा नै सक्ने..
‘विप्लवजी, कुनै समस्या भए आउनुस् वार्ताबाट समाधान गरौँ ‘ : नेता खाँड Wednesday, November 29th, 2017
काठमाडौँ,१३ मंसिर । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय एवं निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक बालकृष्ण खाँणले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)लाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका छन्। बुधवार घोराहीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले हिंसाले हिंसा मात्रै जन्माउने हुँदा वार्तामार्फत केही समस्या भए समाधान गर्न सकिने बताएका हुन् । ‘विप्लवजी यसअघिको तपाँईहरूको..
ललितपुरमा बम विष्फोट, विद्यालयका झ्याल ढोकामा क्षति Tuesday, November 28th, 2017
ललितपुर १२ मंसिर । ललितपुरको लगनखेल नजिकै बम विष्फोट भएको छ। वाम गठवन्धनको चुनावी सभालाई लक्षित गरेर बम विष्फोट भएको थियो। नमुना मछिन्द्र मावि नजिकै भएको बम विष्फोटले विद्यालयका झ्याल ढोकामा क्षति समेत पुगेको छ। चुनावी सभालाई नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको..
ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा भीषण आगलागी, करोडौंको क्षति Wednesday, November 15th, 2017
ललितपुर, २९ कात्तिक । ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र भीषण आगलागी हुँदा तीनवटा उद्योगमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । मंगलबार साँझ औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको आनन्द प्लाष्टिक उद्योगबाट सुरु भएको आगलागीले नजिकै रहेको पूर्ण काष्ठ उद्योग र पञ्चकन्या युनिकमा समेत क्षति पुर्‍याएको हो । साँझ साढे ६ बजेतिर सुरु भएको आगलागी राती १० बजेपछि नियन्त्रणमा लिइएको..
ललितपुरमा ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु Thursday, August 10th, 2017
काठमाडौं, साउन २६ – ललितपुर बालकुमारीमा कोटेश्वरबाट ग्वार्कोतर्फ जाँदै गरेको मोटरसाइकललाई ट्रकले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको ज्यान गएको छ । मोटरसाइकल पछाडि बसेका एकजना घाइते भएका छन् । बिहीबार मध्यान्ह १२ बजेतिर बा ८१ प १६९४ नम्बरको मोटरसाइकललाई ना ४ ख ९९८४ नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको ज्यान गएको हो । दुर्घटना हुँदा घाइते भएका दुवै जनालाई वि एण्ड वि..
को हुन् त ललितपुर महानगरपालिकामा निर्बाचित कांग्रेसका उम्मेदवार ? Wednesday, May 24th, 2017
ललितपुर १० जेष्ठ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख ३१ गते मतदान भएपछि सबैभन्दा पहिले मतपेटिका खोल्ने महानगर थियो ललितपुर महानगरपालिका। तर सुरुवात नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चिरिबाबु महर्जनले अपेक्षा गरे अनुरुप भएन। केही दिनसम्म उनी एमाले उम्मेदवार हरिकृष्ण व्यञ्जनकारभन्दा पछि थिए। तर पनि उनमा आत्मविश्वास थियो, म जित्छु। किनभने उनी जीवनमा कहिल्यै फेल भएकै..